Talata 26 Oktobra 2021 - Sal 118 : 19 - 29
19Vohay ny vavahady fidiran’ny olo-marina
mba hidirako hidera ny TOMPO.
20Ity no vavahady mankao amin’ny TOMPO;
ny olo-marina no aoka hiditra eo!
21Hidera Anao aho, Tompo ô, fa novalianao
ary Ianao no nahazoako fandresena.
22Ny vato nolavin’ny mpanao trano
no efa tonga vatofehizoro.
23Avy amin’ny TOMPO izany
ka mahagaga eo imasontsika.
24Ity no andro nataon’ny TOMPO
mba hifaliantsika sy hiravoantsika.
25Miangavy re, TOMPO ô, omeo fandresena izahay;
miangavy re, TOMPO ô, omeo fanambinana izahay.
26 Hotahîna amin’ny anaran’ny TOMPO anie ilay avy.
Ianareo koa rarînay fitahiana
avy ato an-tranon’ny TOMPO.
27Ny TOMPO no Andriamanitra,
ka hanazava antsika anie Izy!
Milahara mitana sampan-drofia,
ka manatòna ny zoron’ny alitara.
28Andriamanitro Ianao ka hoderaiko,
eny, Andriamanitro ka hasandratro.
29Miderà ny TOMPO ianareo fa tsara Izy:
–Eny, maharitra mandrakizay ny fitiavany!
Lohahevitra Miorena ao amin'ny Tompo amin'ny fanasany